Bishii Maarso 10, 1893, Madaxweynaha Faransiiska wuxuu saxiixay wareegto uu ku abuurayo gumeysi ee Cote d'Ivoire - Afrikhepri Fondation
Madaxweynaha Sadi Carnot
10-kii Maarso 1893, Madaxweynaha Faransiiska wuxuu saxiixay wareegto abuureysa gumeysiga Côte d'Ivoire
Ln Bishii Maarso 10, 1893, ayaa nin cayiman oo la yiraahdo Sadi Carnot, oo markaa ahaa Madaxweynaha Faransiiska, saxeexay wareegtada lagu abuuray gumeysiga Côte d'Ivoire. Gaar ahaan, waxaan gaarsiinayaa wareegtadan, oo muddo dheer la iska indhatiray.
The deegaanada of Faransiis Guinea, Ivory Coast iyo Benin jira saddex deegaanada kala duwan ee la tilmaamay inay deegaanada kooxda koowaad ku taxan Qodobka 4 amarka February 2 1890.
Maamulka sare ee mid kasta oo ka mid ah gumeysiga ayaa loo dhiibay guddoomiye ka caawiyay xoghayaha guud.
Badhasaabyada Faransiiska Guinea, Côte d'Ivoire iyo Benin waxay jimicsi ku sameeyaan, dhamaan deegaannadooda kala geddisan, awoodaha ay go'aamiyaan amarrada iyo qawaaniinta dhaqan gala, iyo gaar ahaan qawaaniinta dabiiciga ee Sebtember 7, 1840.
Badhasaabka Faransiiska Guinea wuxuu mas'uul ka yahay jimicsiga maxakamadda jamhuuriyadda ee Fouta-Djalon iyo dhulalka deriska la ah. Gudoomiyaha Côte d'Ivoire ayaa mas'uul ka ah jimicsiga ilaalinta jamhuuriyada gobolada Kong iyo meelaha kale ee looyarada Niger. Si kastaba ha noqotee, gobollada Samory iyo Thiéba waxay wali ku hoos jiraan xukunka taliyaha sare ee Faransiiska Suudaan. Tallaabada dowladda Benin waxay ku fidin doontaa dhammaan xarumaha ay ku jiraan inta u dhexeysa gumeysiga Ingiriiska ee Lagos iyo gumeysigii Jarmalka ee Togo iyo dhulalka gudaha.
Adeegga macaamiisha waxaa laga bixiyaa mid kasta oo ka mid ah deegaanada ay bixiso kharashka bixiyaha-bixiyaha.
Dhammaan qodobbada ka soo horjeedda amarkan waa la laalayaa.
FG: Amarkii Sebtember 7, 1840 ee laxiriira Senegal iyo ku tiirsanaantiisa ayaa markaa lagu dabaqi jiray Côte d'Ivoire. Gumaysiga waxaa maamuli lahaa gudoomiye iyo laba caaqil maamul oo ay caawiyaan guddi maamul (adigu waad aqrisaa xaqaas, Lol). Golahani wuxuu ka koobnaa gudoomiyaha, labada madax ee maamulka iyo laba magac.
Waxaa qoray André Silver Konan (Wariye-qoraa)
Taariikhyahanadu waxay noo sheegeen in Masar ay ahayd ilbaxnimo Negro-Afrika